Fampiharana Android: hevitra, famoahana vaovao, maimaim-poana ary maro hafa! | Androidsis (Pejy 15)
Ao amin'ny Play Store dia efa afaka mahita ilay mpikaroka rakitra momba ny sosona manokana an'ny telefaona Motorola ianao: Moto Files.
Tsy ho ela ny Instagram dia hamela pinch-to-zoom amin'ny sary sy horonan-tsary
Nanavao ny fampiharana ny Instagram mba hampiasa ny fihetsika pinch-to-zoom amin'ny horonan-tsary sy sary; tsy ho ela dia ho amin'ny Android tsy ho ela ihany koa.
Circle SideBar, ilay fampiharana maimaimpoana izay mameno tsara ny Android Launcher anao
Androany aho mitondra anao Circle SideBar izay mety ho famenon-javatra tonga lafatra ho an'ny Android Launcher.
Raha mitady ny hametraka ny smartphone ianao amin'ny fitsapana mba hahitanao hoe manao ahoana ny asany, dia manana ny kinova Geekbench 4 vaovao amin'ny Android ianao.
Androany aho dia manolotra mpilalao mozika vaovao ho an'ny Android izay amin'ny anaran'ny Minimal Player dia toa tena mahavariana.
Google amin'ny Apps dia mamela anao hitady vaovao ao anatin'ny fampiharana
Vetivety dia hahazo fanavaozana ny app Google ianao mba hampidirina ny fikarohana ao anaty fampiharana apetraka amin'ny findainao amin'ny In Apps.
Ny galeri-tsary tsara indrindra ho an'ny Android dia antsoina hoe PiKtures miaraka amin'ny «K» ary maimaim-poana izany
Androany dia manolotra an'i PiKtures miaraka amin'i "K" izahay, izay ho ahy no tranokala tsara indrindra ho an'ny Android, fampiharana vaovao feno fomba sy fiasa.
Google Virtual Assistance dia mikendry ihany koa ny mailaka mailaka Inbox
Inbox dia mahazo fanavaozana amin'ny lafiny mpizara miaraka amina interface vaovao ho an'ny karoka, fampitandremana ny fanampiana virtoaly.
Google Crowdsource dia fampiharana izay mitady fanampiana amin'ny fandikan-teny sy serivisy hafa avy amin'ny mpampiasa
Crowdsource dia rindranasa vaovao iray izay anantenan'ny Google fa hanampy azy hanamarina ireo fandikan-teny, torolàlana amin'ny Sarintany ary maro hafa.
Suhide no fampiharana Chainfire vaovao manafina ny satan'ny RoOT amin'ny apps
Misy ny fampiharana toa ny Android Pay izay raha mahatsikaritra fa manana faka amin'ny findainao ianao dia tsy hamela anao hampiasa azy io. Suhide no fampiharana Chainfire izay misoroka an'io.
[APK] Google Contacts dia nohavaozina ho 1.5 miaraka amina endrika vaovao, labozia ary dika mitovy
Google Contacts dia nohavaozina ho amin'ny andiany 1.5 miaraka amina endrika famolavolana vaovao, marika nampiana ary fahaiza-mitantana duplicate.
Ny Huawei avo lenta dia ho avy apetraka miaraka amin'ny fampiharana Truecaller
Huawei dia hametraka mialoha ny fampiharana Truecaller hiadiana amin'ny spam an-tariby amin'ny faritra avo lenta, manomboka amin'ny Honor 8, ny finday avo lenta farany natomboka
Ny lahasa, fampiharana lisitr'i Clone to-do an'i Astrid, ho safidy tsara indrindra amin'ny Todoist
Tasks dia rindrambaiko maimaimpoana izay klone an'i Astrid, iray amin'ireo fampiharana mandray an-tsoratra tsara indrindra nanjavona tao amin'ny Google Play Store.
Ahoana ny fijanonana hizara ny mombamomba ny kaonty WhatsApp anao amin'ny Facebook
WhatsApp dia mizara fampahalalana avy amin'ny kaontinao amin'ny Facebook, ka mampianatra anao izahay hitsahatra amin'ny fizarana azy amin'ny fomba tena tsotra.
YouTube dia manavao ny famaritana horonantsary sy ny hetsika hahazoana fidirana tsara kokoa
YouTube, avy amin'ny lafiny mpizara, dia nanavao ny interface ho an'ireo bokotra izay tena fampiasa rehefa milalao horonantsary
Amin'ity fampiharana ity dia azonao atao ny mampihetsika ny maody alina amin'ny Android 7.0 Nougat
Ao amin'ny kinova farany, Google dia nanala ny Mode Night, fa ity fampiharana ity dia ahafahanao manavotra azy raha manana Android 7.0 Nougat amin'ny telefaona ianao.
Ahoana ny fomba hamadihana ny Android ho Sony PSP miaraka amin'ny emulator PSP tsara indrindra ho an'ny Android
Anio dia hasehontsika anao ny fomba fanovana ny Android ho lasa Sony PSP hahafahana milalao lalao PSP amin'ny endrika ISO amin'ny fomba tena tsotra.
Ahoana ny fomba fampidirana drawer application amin'ny terminal Android anao
Manana terminal Android ve ianao raha tsy misy vatasarim-panafody? Te-hanampy mpantsaka fampiharana Android vaovao ao amin'ny terminal anao ve ianao nefa tsy mahafoy ny Launcher anao?
WhatsApp dia hizara ny angonao amin'ny Facebook araka ny nambara tao amin'ny bilaoginy
Nanavao ny politikany momba ny tsiambaratelo i WhatsApp ary nanambara fa hanomboka hizara ny angon-drakitrao amin'ny Facebook izy hanokatra varavarana ho an'ireo orinasa eo an-toerana
PayPal dia efa manohana ny sensor amin'ny dian-tànana amin'ny Android
Manomboka androany, izay fitaovana misy Android Marshmallow na avo kokoa, dia afaka mampiasa ny sensor fantsom-panafody hidirana amin'ny PayPal.
Facebook Messenger dia mizaha toetra amin'ny bokotra «Add contact»
Facebook Messenger dia hampiditra, raha mandeha tsara ny fitsapana, bokotra "Add contact" vaovao hanasaraka ny fampiharana amin'ny tambajotra sosialy.
WhatsApp dia efa mamela ny fandefasana GIF mihetsika, na dia misy nuansa aza
Telegram dia lehibe tokoa amin'ny fandefasana GIF, raha ny WhatsApp, na dia manampy GIF aza dia tsy mahatratra ny fahaizan'ilay voalohany.
Prisma dia hiasa tsy ho ela
Prisma no fampiharana lamaody ho an'ny sivana ary amin'ny herinandro ambony dia tsy mila fifandraisana ianao raha hampiasa azy, satria hiasa ivelan'ny Internet izany.
ap15 Launcher, mpandefa Android minimalista, miasa ary hafa izay tianao
Androany aho manolotra anao Android Launcher minimalist, miasa ary hafa izay hanova tanteraka ny fomban'ny terminal Android anao.
Ny serivisy fandefasana mozika any Amazon dia mety mitentina 5 $ isam-bolana ho an'ireo mpampiasa Echo
Amazon dia te hiditra amin'ny tsena sarotra amin'ny streaming mozika miaraka amin'ny fitaovana Echo ary fandoavam-bola $ 5 isam-bolana mba hidirana amin'ny mozika tsara indrindra.
Opera dia mandefa ny serivisy VPN maimaim-poana sy mora ampiasaina amin'ny Android
Raha mitady VPN maimaimpoana sy kalitao ianao, ny safidin'ny Opera no iray amin'ireo manaitra indrindra amin'izao fotoana izao. Navoaka androany.
Ao amin'ny kinova farany an'ny Allo, antenaina ny fanaingoana farany, ny hafatra manimba tena toy ny Snapchat sy ny motera fikarohana mifangaro.
Google Duo dia miakatra amin'ny laharana ambony amin'ny fisintomana satria efa misy manerantany izao
Google Duo dia natomboka manerantany taorian'ny roa andro nanatontosana ireo dingana sy faritra navela hitsapa ity app ity ho an'ny antso an-tsary
Instagram dia manolotra fantsona hetsika horonan-tsary hijerena feed
Instagram dia mampahafantatra anio ireo fantsona vaovao misy ny hetsika amin'ny horonan-tsary mba tsy hahadino anao na hahitana azy ireo foana.
Duo, fampiharana antso an-tsarimihetsika vaovao an'ny Google, atsy ho atsy dia hanolotra fanampiana ho an'ny antso am-peo
Duo avy amin'i Google no fampiharana vaovao manao antso an-tsary mivantana ary tsy ho ela ianao dia hahazo ny safidy hiantsoana feo.
White Noise dia mamela anao hamorona sy hizara ny feo manodidina anao
White Noise dia rindrambaiko ahafahanao mirakitra feo sy mizara feo manodidina mba hizarana azy ireo amin'ny tambajotra sosialy sy maro hafa
Storyo dia fampiharana mamokatra horonantsary avy amin'ny sary amin'ny findainao
Storyo dia fampiharana izay ampiasaina hamoronana horonantsary mandeha ho azy, na dia mamorona azy ireo amin'ny tanana aza izany raha sitraky ny mpampiasa izany.
Google mandefa ny rindranasa Duo vaovao ho an'ny iOS sy Android, serivisy manokana manokana hiantsoana horonantsary haingana, mora ary azo antoka
100 Gb fitehirizana rahona maimaimpoana ho an'ny backup an'ny Android-nao
100 Gb fitehirizana rahona maimaimpoana hanaovana kopian'ny backup amin'ny terminal Android anao ary hiarovana azy ireo foana.
FineScanner dia fampiharana iray hafa amin'ny famotopotorana antontan-taratasy avo lenta
FineScanner dia avy amin'ny iOS hanehoana fa misy fomba hafa iray hafa an'ny CamScanner malaza an'ny Microsoft na Office Lens.
10 amin'ireo fampiharana tsara indrindra azonao ampiasaina amin'ny Chromecast anao
Chromecast dia dongle izay mamela ny streaming atiny multimedia amin'ny alàlan'ny efijery fahitalavitra. Ireo fampiharana 10 dia manatsara ny fampiasana azy.
Ny plugin tsara indrindra ho an'ny Android Launcher dia antsoina hoe CM Swipe. MAHATALANJONA!!
Androany aho dia manolotra izay tsy isalasalana fa famenon-tsoa tsara indrindra ho an'ny Android Launcher, fampiharana izay manahafana ny PIE Control ho an'ny Android rehetra.
Fampiharana 5 ho an'ny efijery hidin-trano izay tsy maintsy andramanao amin'ny Android-nao
Ireo rindranasa 5 ireo dia tsy mitovy amin'ny ambiny amin'ny alàlan'ny fananana kalitao manokana sy amin'ny fananana kalitao lehibe ho an'ny fangatahana fanakanana
Ny fampiharana rindrambaiko Android 3 tsara indrindra
Ireo rindranasa 3 ireo dia ahafahanao manana fitaovana marobe ampiasain'ny sensor ho an'ny findainao hanatanterahana asa isan-karazany.
Fampiharana Android 4 handefasana rindrambaiko hafa ary hanana tranga marobe amin'ny fotoana iray
Fampiharana 4 izay mendrika tanteraka ny tsirairay amin'izy ireo mba handefasana fampiharana ary hamorona tranga iray. Marina ny fananana kaonty lalao roa, WhatsApp ...
Fampiharana izay mety hanjary ilaina amin'ny fotoana apetrakao azy ary hahatsapanao fa ilainao izany amin'ny sarintany ivelan'ny Internet.
Ny fampiharana 5 tsara indrindra ho anao hanana fahasalamana tsara kokoa
Raha te hanatsara ny fahasalamanao ianao ary hahatsapa ho salama kokoa, ireto fampiharana 5 ireto dia ho mora ampiasaina hamita ny sasany amin'ireo lohahevitra hanatsarana.
Fampiharana keyboard 4 mety tsy fantatrao akory
Fampiharana keyboard 4 avo lenta izay tsy misy amin'ireo SwiftKey, Android Keyboard, Swiype na Minuum ary mety tsy fantatrao.
Kitendry fihetsika Android 4 tsara indrindra
Fampiharana keyboard Android 4 izay miasa tsara amin'ny fihetsika ary tsy azonao adino ny kalitao sy ny safidiny tsara.
Vaovao farany Xposed Pokemon mifanaraka amin'ny Pokemon Go 0.31.0.
Androany izahay dia manome anao ny fanavaozana vaovao ny Pokemon Xposed izay miasa tanteraka sy mifanaraka amin'ny kinova Pokemon Go 0.31.0 farany.
Ny fampiharana 5 tsara indrindra hamakiana e-boky amin'ny Android
Ao amin'ny Android dia manana rindranasa 5 izahay izay afaka mora ampiasaina amin'ny famakiana boky nomerika na e-boky avy amin'ny fitaovantsika.
YouTube Music Hack ho an'ny Android Marshmallow tsy misy Root
Anio izahay dia manome anao ny vahaolana amin'ny olan'ny fifandraisana YouTube Music miaraka amin'ity Hack YouTube Music ity manan-kery ho an'ny firenena ary na dia Android Marshmallow aza.
Fampiharana lalao video 4 izay tsy Twitch
Twitch no fampiharana tsara indrindra amin'ny fandefasana lalao video amin'ny fotoana tena izy, na dia misy aza safidy hafa mahaliana.
[APK] Sintomy ary apetraho ny kinova Pokemon Go vaovao, fantaro ny vaovao rehetra tafiditra
Androany izahay mitondra anao ny kinova Pokemon Go mivantana amin'ny apk, hazavainay ny fomba fametrahana azy amin'ny tanana ary koa ny vaovao rehetra tafiditra.
Fampiharana tena ilaina 5 ho an'ireo tia natiora
Avy amin'ny Android dia azontsika atao ny manatona andiana fampiharana izay ahafahantsika mahatakatra bebe kokoa ny tontolo iainana sy ny toetran'ny faritra misy antsika
[Alefaso 2-8-2016] Ahoana ny fametrahana YouTube Music sy hankafizanao azy any amin'ireo firenena mbola tsy ofisialy ny fampidinana azy
Androany dia manazava tsikelikely ny fomba fampidinana sy fametrahana ny YouTube Music izahay ary hampandeha izany any amin'ny firenena na dia tsy misy ofisialy aza.
Efa misy ny Twitter ho an'ireo sticker rehetra izay azo ampiasaina amin'ny sary hahafahana mitady azy ireo.
[APK] YouTube Gaming 1.5 manampy chat video, orientation landscape, tantara hijerena sy maro hafa
YouTube Gaming dia nohavaozina ho amin'ny andiany 1.5 izay manana andian-dahatsoratra vaovao lehibe toy ny maody fizahantany, chat feno ary maro hafa.
Tsy ho ela dia hahazo ny fahaizana mampihatra ny sivana ao anaty horonan-tsary i Prisma
Miaraka amin'ny Prisma dia afaka manova ny horonan-tsary miaraka amin'ireo sivana manokana izay hamadika ireo sary nalaina ho zavatra tena kanto sy manokana ianao.
Mizarà fampiharana, lalao video, boky ary maro hafa miaraka amin'ny olona 6 miaraka amin'ny Google Play Family
Google Play Family izao dia zava-misy hizarana karazan-atiny an-tserasera amin'ny olona farafahakeliny hatramin'ny 6 ao amin'ny fianakaviana.
Opera Mini ho an'ny Android dia manampy endri-javatra fampidinana video
Opera Mini dia nampiditra ny fahafaha misintona ireo horonantsary lalaovinao amin'ity tranonkala ity ho an'ny Android izay miaro ny fampihenana ny fampiasana data
Google dia mampiditra sokajy vaovao valo amin'ny Google Play Store
Google dia miasa mafy hatrany amin'ny fanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa nomen'ny Google Play Store. Nanampy sokajy vaovao valo ianao izao.
ETO NY Maps dia mandefa indray toy ny ETO WeGo misy fampiasa sy fomba fiasa vaovao
Ankehitriny ny anaran'ny HERE Maps dia ETO WeGo ary miaraka aminy dia mitondra andiana fiasa vaovao toy ny taxi sy ny zotram-bisikileta ary vaovao maro hafa.
Fitsapana YouTube miaraka amin'ireo tiana, fanehoan-kevitra ary maro hafa amin'ireo hevitra avy amin'ny fampiharana
YouTube dia manandrana interface vaovao tiana, hihetsika ary bebe kokoa amin'ny hevitra avy amin'ny fampiharana Android mihitsy.
Mpihazakazaka 7.0 manampy vondrona hanohitra ny namanao handeha hihazakazaka
Runkeeper dia nanavao ny fampiharana miaraka amina endri-javatra tsara iray hampirisihana ny famoronana vondrona hiara-jogging amin'ny olona iray.
Ny maody alina izao dia misy amin'ny kinova Twitter ho an'ny Android
Joaquim Verges dia nanolotra ny maody alina ho an'ny fampiharana Twitter ofisialy, izay mahavita manolotra traikefa an-tsary hafa.
Ny CTRL-F dia manampy anao hikaroka antontan-taratasy tena misy amin'ny fakantsary fakan-telefaonao
CTRL-F dia fampiharana Android izay mampiasa ny fakantsary sy ny fanekena ny lahatsoratra hikarohana antontan-taratasy tena izy
[APK] Sintomy sy apetaho Pokemon Xposed, ny fomba tsara indrindra hihaza Pokemons nefa tsy hiala ao an-trano, eny fa na dia amin'ny terminal Samsung aza
Androany izahay dia mampianatra anao ny fomba fampidinana sy fametrahana Pokemon Xposed na inona no fomba tsara indrindra handehanana mihaza Pokemons nefa tsy miala ao an-trano.
Ahoana ny fomba hijerena sarimihetsika maimaim-poana ara-dalàna
Anio dia asehonay anao ny vahaolana voafaritra tsara hijerena sarimihetsika maimaim-poana amin'ny terminal Android-nao.
Ny fampiharana haingo tsara indrindra ho an'ny Android
Te handoko indray ny tranonao ve ianao ary tsy fantatra hoe aiza no hanombohana azy? Ny mpitari-dalana anay miaraka amin'ireo fampiharana haingo tsara indrindra ho an'ny Android dia azo antoka fa tena manampy anao tokoa
Ahoana ny fanesorana ny fampandrenesana Prisma maharitra izay miseho rehefa mampiasa ny fampiharana
Rehefa mampiasa Prisma ianao dia mety hahita fampandrenesana tsy misy tohiny milaza fa manodin-tsary izy io. Manampy anao izahay hanala azy.
Nahazo famolavolana mazava sy "faritra mahaliana" ny Google Maps
Google Maps dia manolotra ny fanovana endrika hametrahana mazava kokoa ny sari-tany ary hanasongadinana ireo faritra antsoina hoe "faritra mahaliana"
Ahoana ny fanesorana ny mari-drano amin'ireo sary alainao amin'ny Prisma
Prisma dia iray amin'ireo fampiharana mahagaga indrindra amin'ny taona ary ny sivana zavakanto dia mitantana ny fanafihana tambajotra sosialy hafa natokana ho an'ny sary.
Motion dia fampiharana iray ahafahanao mirakitra horonan-tsary mihetsika mahavariana
Motion dia fampiharana iray izay manamora ny famoronana horonantsary fijanonana, ny teknikan'ny sarimiaina ampiasaina amin'ny sarimihetsika tanimanga maro.
Google Play dia manampy algorithm vaovao izay mahay manena ny haben'ny fampidinana sy ny fanavaozana
Ity algorithm vaovao ity izay nampiharina tamin'ny Google Play Store dia mampihena ny haben'ny fampidinana sy ny fanavaozana.
Prisma, ny fampiharana lamaody ho an'ny sivana zavakanto, azo alaina ao amin'ny Google Play Store ankehitriny
Prisma dia misy amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny Google Play Store. Ny fampiharana sivana lamaody tsara indrindra amin'ny sokajy misy azy
Google Maps dia mamoaka kinova vaovao miaraka amin'ny maody Wi-Fi sy fampandrenesana ho an'ny fitateram-bahoaka ihany
Google Maps dia nohavaozina miaraka amina endrika vaovao roa: fampandrenesana fanemorana fitateram-bahoaka ary fomba Wi-Fi ihany ho an'ny sarintany ivelan'ny Internet.
Tinder dia mandefa ny Tinder Social, fomba tsara kokoa hifandraisana
Nandefa ny Tinder Social i Tinder mba hampirisihana ny famoronana vondrona namana hihaona amin'ireo vondrona hafa ary hihaona mba hahafinaritra kokoa ny alina
Koush dia mandefa Inkwire, fampiharana vaovao hizara ny efijery findainao amin'ny an'ny hafa
Ho an'ny fidirana lavitra finday finday avo lenta avy amin'ny iray hafa, nandefa Inkwire tamin'ny endrika beta i Koush hahafahanao miditra ao amin'ny Play Store
Doremi 2, ilay mpilalao mozika ho an'ny Android izay misintona mozika maimaim-poana
Androany dia manolotra fampiharana iray ao amin'ny Google Play Store izahay izay hanampy anay hisintona mozika maimaim-poana amin'ny Android.
RazerGo dia te-ho fampiharana fampiharana ampiasainao rehefa milalao Pokémon GO
Raha mitady rindrambaiko fifantohana mifantoka amin'ny Pokémon GO ianao, azo antoka fa RazerGo dia manana izay rehetra notadiavinao tao anaty iray mba hahafahana manomana fanafihana tsara kokoa.
Ahoana ny fomba fampidinana sy fametrahana Apptoide, fivarotana fampiharana hafa tsara indrindra amin'ny Google Play Store
Androany dia asehoko anao ny fomba fampidinana sy fametrahana Apptoide soa aman-tsara ao amin'ny Android mba hankafizantsika ireo rindranasa izay tsy azontsika alaina ao amin'ny Google Play
Fampiharana fanamarihana 4 ho solon'ny Evernote
Fampiharana 4 miaraka amin'ny kalitaony sy ny tsy fitovizany fa tsy misy fetran'ny fitaovana hanindriana ireo naotinao rehetra
Periscope dia mandray tranofiara fohy, ny fahaizana mijery ny fampielezam-peo Periscope amin'ny sioka sy maro hafa
Periscope izao dia mamela ny fampidirana Periscope ao anaty bitsika, ny fahaizana mijery ireo zotram-pifandraisana fohy, sy maro hafa.
Ny Bubble Books ao amin'ny Play Books dia manitatra ny haben'ny bikan'ny kabary amin'ny tantara an-tsary
Google dia nanolotra Bubble Books ho an'ny Play Books, izay mamporisika ny famakiana tantara an-tsary nomerika amin'ny alàlan'ny fampitomboana ireo fitenenana miteny.
Ny fitambarana tonga lafatra amin'ny efijery hidin-trano miampy Launcher dia omen'ny Next plus Arrow anao
Androany aho dia manoro hevitra ny ho ahy dia ny fitambarana efijery mihidy miampy Launcher ho an'ireo terminal Android-nay.
Allo sy Duo dia azo ampidirina ao amin'ny Android 7.0 Nougat ao anatin'ny rafitra
Nisy tsaho nilaza fa mety ho tafiditra ao amin'ny Android 7.0 Nougat na i Allo na i Duo rehefa mivoaka.
[APK] WhatsApp izao dia misy mailaka vaovao sy redial amin'ny beta
Azonao atao ny misintona ny APK na mandray anjara amin'ny beta hahazoana ireo vaovao WhatsApp roa: voicemail sy callbacks.
Ny rindranasa tsara indrindra hijerena sarimihetsika amin'ny Android-nao
Fifanarahana amin'ireo rindranasa sy pejy Android tsara indrindra hijerena sarimihetsika sy andian-tsarimihetsika amin'ny telefaona na takelaka maimaimpoana ary tsy misy viriosy
Manidy ny Android open beta i Prisma noho ny fidiran'ny mpampiasa marobe
Andro iray taorian'ny nanombohany ny fampiharana tamin'ny Android tamin'ny endrika beta ampahibemaso, dia nanidy azy io ny Prisma noho ny habetsahan'ny besinimaro niditra.
[APK] Ny fanavaozana vaovao ny Pokemon Go 0.29.3 dia misy ao amin'ny Play Store sy amin'ny APK
Efa manana ny fanavaozana Pokemon Go 0.29.3 vaovao azo alaina ao amin'ny Play Store izahay ary ho an'ny fampidinana mivantana amin'ny endrika APK.
Ny sary Google dia misy ao amin'ny 1.24 fitaovana fanangonam-bokatra nohatsaraina sy maro hafa
Raha zatra mametaka sary amin'ny Google Photos ianao, dia mihatsara ity kinova 1.24 ity fitaovana tena manampy amin'ny tranga maro.
Ny Arts & Culture dia fampiharana Google vaovao hampanakaiky ny tontolon'ny zavakanto amin'ny smartphone anao
Raha mitady rindrambaiko manokana ho an'ny tontolon'ny zavakanto sy ny kolotsaina ianao, ny Zavakanto & Kolontsaina avy amin'i Google dia fampiharana manokana manokana izay tsy tokony halainao.
Nahatratra 1.000 tapitrisa isam-bolana ny mpampiasa Facebook Messenger
Facebook Messenger dia nahatratra 1.000 tapitrisa isam-bolana mpampiasa mavitrika ankehitriny, izay mahatonga azy io ho fampiharana be mpampiasa.
Dials Calendar, famantaranandro minimalista mifototra amin'ny fisehoan-javatra amin'ny kalandrie miaraka amina fikitihana maso amin'ny iOS
Raha mitady fampiharana famantaranandro sy kalandrie faran'izay minimalista ianao, Dials Calendar no tonga lafatra amin'izany amin'ny alàlan'ny fanolorana traikefa manokana an'ny mpampiasa.
Vonona ny handefa fampiharana amin'ny chat ho an'ny Pokémon GO i Razer amin'ny herinandro ambony
Ny 25 jolay ho avy izao dia havoaka ny fampiharana an'i Racer hahafahan'ireo mpilalao Pokémon GO mifandray amin'ny hafa eo an-toerana
Skype dia nanala ny fanohanana an'ireo Android taloha
Nanambara i Microsoft fa tsy hanavao ny Skype amin'ny Android amin'ny kinova taloha amin'ity rafitra fiasa ity ho an'ny finday.
[Nohavaozina] Prisma tonga amin'ny Android rehefa nahomby tamin'ny sivana artista ao amin'ny iOS
Prisma no fampiharana mandeha amin'izao fotoana izao hametrahana sivana artista amin'ireo sary raisinao amin'ity fahavaratra ity ary mampiasa algorithm.
[APK] Facebook for Android izao dia mamela anao hitahiry horonan-tsary hijerena azy ireo ivelan'ny Internet
Manomboka androany dia afaka misintona horonantsary ivelan'ny Facebook amin'ny Facebook ho an'ny Android ny mpampiasa rehetra eto amin'izao tontolo izao. Ampidino ny APK
Noisli atolotra amin'ny € 0,10; ny fampiharana quintessential ho an'ny feo miala sasatra
Raha mitady rindrambaiko hialana sasatra amin'ny fahavaratra ianao amin'ny fialantsasatra amin'ny alàlan'ny headphone, Noisi no filamatra ary bebe kokoa atolotra anao izao
Amin'izao fotoana izao dia manolotra bokotra filalaovana amin'ny rakikira sy ny onjam-peo rehetra izy ary ho an'ny kinova Play Music manaraka, timer
Mamorona GIF mihetsika mandritra ny segondra miaraka amin'ny GIF Camera
Raha mitady rindranasa hamoronana GIF mihetsika ianao ao anatin'ny segondra vitsy, GIF Camera dia iray amin'ireo zavatra tsara indrindra azonao.
Toy izao no fiasan'ny hafatra an-tsary Hangouts 11, ampianarinay anao ny fomba fametrahana na fanavaozana ny Hangouts ianao na dia mbola tsy misy ao amin'ny Play Store aza.
Izay rehetra izao dia azo asaina amin'ny chat vondrona ao amin'ny Hangouts miaraka amina rohy tokana
Hangouts dia ahitana zava-baovao mahafinaritra ahafahana manasa mpampiasa rehetra amin'ny alàlan'ny rohy tokana mankany amin'ny vondrona chat manokana.
Adobe Lightroom dia nohavaozina ho 2.1 miaraka amin'ny fakan-tsary natsangana
Adobe Lightroom dia nohavaozina miaraka amina fanatsarana tena mahaliana ao anatin'izany ny fampiharana fakan-tsarimihetsika nohatsaraina sy maro hafa.
[APK] Ny kinova 5.1 an'ny Google Keyboard tafiditra ao amin'ny Android N izay misy ao amin'ny Play Store ankehitriny
Ny kinova 5.1 an'ny Google Keyboard tafiditra ao amin'ny kinova ho an'ny mpamorona Android N dia azo alaina ao amin'ny Google Play Store.
Zoho Notebook dia fampiharana mandray an-tsoratra izay te hisolo an'i Evernote
Tonga i Zoho Notebook hanandrana hisolo an'i Evernote, na dia manakaiky kokoa aza ny endriny amin'ny Google Keep
Efa ananantsika ny apk ny fanavaozana Pokemon Go vaovao, fanavaozana misy fanamboarana bibikely sy fanatsarana ny fahombiazana.
[APK] Farany nampiampy fanohanana ireo hafatra horonantsary ao amin'ny kinova vaovao i Hangouts
Hangouts dia nohavaozina amin'ny andiany 11 miaraka amin'ireo hafatra an-tsarimihetsika amin'ny Android taorian'ny nahalany fotoana fohy tao amin'ny iOS.
Azo alefa amin'ny alàlan'ny Buffer izao ny hafatra Instagram
Buffer dia fampiharana iray mamela ny fitantanana tambajotra sosialy marobe ary ankehitriny ny fahaizana mandahatra lahatsoratra Instagram dia nampiana.
[APK] Sintomy ary apetraho ilay HTC 10 Launcher vaovao, manan-kery ho an'ny Android 4.4 sy ambony kokoa
Androany izahay dia manazava ny fomba fampidinana sy fametrahana ny Launcher an'ny HTC 10 vaovao amin'ny Android 4.4 Kit Kat na Android ambony kokoa.
Ilay GPS maimaim-poana 3 ho an'ny Android
Ity ny lisitr'antoko manokana momba ireo GPS maimaim-poana 3 tsara indrindra ho an'ny Android, ny tsirairay amin'izy ireo no tsara indrindra amin'ny fombany ary miaraka amina fampiasa tena tsara.
Miaraka amin'ny GoEuro dia hahita ny tolotra tsara indrindra amin'ny dia ianao
GoEuro dia fampitahana fitsangatsanganana feno hita amin'ny fitaovana Android izay mampitaha ny bisy, ny telo ary ny fiaramanidina hahafahanao mahita ny fifanarahana tsara indrindra.
Microsoft Sprightly dia fampiharana ilaina ho an'ny mpiasa tsy miankina na mpandraharaha izay avy any an-trano dia afaka mamorona vokatra artisan izay amidiny avy eo
Sintomy eto maimaim-poana 14 andro ny toetrandro, ny fampiharana ny toetr'andro tsara indrindra ho an'ny fitaovanao Android. Misintona mihoatra ny 10 tapitrisa ny manohana azy!
Wonder.fm dia manome anao fidirana amin'ny mozika vaovao maro karazana
Wonder.fm dia fampiharana sy serivisy web izay tompon'andraikitra amin'ny fitondrana anao ny fisafidianana mozika tsy miankina tsara indrindra izay ho lasa fironana amin'ny fotoana fohy
Manomboka mizaha toetra ny resaka miafina manimba tena ny Facebook
Ny mpampiasa dia afaka mampiditra fameram-potoana amin'ny hafatra alefa amin'ny Facebook Messenger izay hanimba tena rehefa tonga amin'ny fetra farany izay.
Bitly farany nandefa ny fampiharana Android ofisialy
Farany, rehefa afaka taona maro, Bitly dia namoaka ny fampiharana ofisialin'ny URL hanafohezany ny Android. Mendrika ny fiandrasana ity fampiharana tsara ity.
Cyanogen OS C-Apps dia misy ho an'ny rehetra manana CM
Cyanogen Inc. dia nanao ny fonosana C-Apps mba hahafahan'ny mpampiasa manana ny endrika CM13 manazava ireo fampiharana dimy ao aminy.
ASAP Launcher dia mpandefa fampiharana izay mifantoka amin'ny karatra
Raha mitady mpandefa fampiharana izay mifantoka amin'ny karatra ianao, ny ASAP Launcher dia mety ho ilay app tadiavinao hisolo ilay iray anananao izao.
[APK] Miomana amin'ny sari-tany «Wi-Fi ihany» sy fiasa vaovao mahaliana roa i Google Maps
Ny beta vaovao an'ny Google Maps dia misy andian-dahatsoratra vaovao, ao anatin'izany ny fahaizana mampiasa Wi-Fi hisintomana sarintany ivelan'ny seranana
Yahoo mandefa ny botany ho an'ny toetr'andro, vaovao, vola ary bebe kokoa amin'ny Facebook Messenger
Vao nanambara i Yahoo fa nandefa ny botany manokana ho an'ny Facebook Messenger. Misy efatra mifandraika amin'ny toetr'andro, vaovao, ara-bola ary biby fiompy
Androany aho te-hanolotra fampiharana fakantsary fakan-tsary iPhone 6 avy amin'ny Apple, fakan-tsary ahafahantsika misintona sy mametraka amin'ny Android maimaimpoana.
Snapchat dia nanisy ny "Memories" ho zava-baovao iray hananana fanangonana manokana ny tantaranao sy ny Snaps tianao indrindra.
Google dia manambara ny fandikan-teny, ny scanning barcode, ary bebe kokoa ao amin'ny Google Now eo amin'ny tap
Ankehitriny amin'ny Tap dia mbola fampiasa tsy fantatra an'ny Google ny maro ary tamin'ity indray mitoraka ity no nampidiran'ny Mountain View endrika vaovao telo.
[APK] Sintomy ary apetraho ny fakantsary LG V10 tsy misy ROOT
Androany izahay mitondra anao ny apk manokana an'ny fakantsary LG V10 vaovao hahafahanao misintona sy mametraka azy amin'ny tanana amin'ny terminal LG G3, LG G4 na LG G5 anao.
Wydr dia toy ny Tinder, fa hividy zavakanto
Wydr dia mamela anao hitia asa kanto amin'ny alàlan'ny swipe na fihetsika ary amin'izany dia manome teboka hampiavaka azy eo amin'ny fiaraha-monina.
Ny karatra fotoana Google Now dia nohatsaraina tamin'ny sary vaovao roa
Google dia nanavao ny karatra toetr'andro Google Now miaraka amin'ny kisarisary roa vaovao ahafahanao mahafantatra ny toetr'andro sy ny rotsakorana
Skype izao dia mamela ny fizarana rakitra hatramin'ny 300MB
Microsoft dia nanavao ny Skype miaraka amin'ny fahaizana mizara rakitra hatramin'ny 300MB, izay mety ahitana sary, horonan-tsary na antontan-taratasy.
Amin'ny faritra, Pokémon Go dia natomboka tany amin'ny firenena maro ary noho izany antony izany dia afaka maka ny APK hametraka izany amin'ny fitaovantsika isika.
Ny fampiharana 3 tsara indrindra hijerena sy hitantanana ny fitehirizam-bokin'ny smartphone
Ho an'ny fitaovanao Android dia manana fampiharana 3 ianao izay hanampy anao hijery sy hitantana ny fitadidiana anatiny sy maimaimpoana maimaimpoana haingana sy mora.
Ahoana ny fomba fampidinana mozika avy amin'ny Spotify, Apple Music, Google Play Music ary ireo fampiharana streaming audio hafa
Anio dia asehonay anao ny fomba fampidinana mozika mivantana avy amin'ny Spotify sy ny fampiharana mitovy amin'izany amin'ny mozika mivantana na amin'ny radio amin'ny Internet.
Ahoana ny fomba hanokafana ireo vakizoro malalaka nataon'i Chrome miaraka amin'ny fihetsika haingana
Ampianarinay anao ity fika tsotra ity hanokatra ny takelaka misokatra rehetra ao amin'ny Chrome miaraka amina fihetsika malaky mba hananana ny fitantanana rehetra azy ireo ao anatin'ny segondra
Ny 13 Jolay no daty famoahana any Espana ho an'ny YouTube Kids
Manomboka amin'ny 13 Jolay, ny rindranasa YouTube Kids dia azo sintonina mba hahafahan'ny ankizy kely ao an-trano miditra ao anaty atiny multimedia maro.
Koush dia mandefa Vysor ao amin'ny Play Store ihany koa
Vysor dia rindrambaiko ho an'ny Chrome izay efa ho efa ho herintaona izao nefa misy ihany koa ao amin'ny Google Play Store ho an'ny fitaratra.
Ny fampiharana Audible dia nohavaozina miaraka amin'ny fahafahany mizara clip audio, fantsona voaova indray ary maro hafa
Nohavaozina tamin'ny Android ny Audible hahafahana mamorona rakipeo feo zaraina amin'izay tianao, ankoatra ireo fiasa vaovao hafa.
Snapkeys dia kitendry efa nohamarinina ho an'ny Android Wear smartwatches misy endrika boribory
Ao amin'ny Android Wear dia azonao atao ny mampiasa keyboard, toy ny Minumum na Fleksy, mba hanana Snapkeys ihany koa amin'ny endrika boribory
Google dia manomana ny kinova VR an'ny Chrome ho an'ny Android
Ary farany, ny Google Cardboard dia azo ampiasaina hijerena ny tranonkala avy amin'ny kinova Chrome ho an'ny Android izay iasan'ny Mountain View.
Asus ZenUI launcher dia azo apetraka amin'ny Android 4.3 na fitaovana avo kokoa ankehitriny
Asus dia manana ny fampiharana launcher ZenUI Launcher avy amin'ny Google Play Store ho an'ny fitaovana rehetra misy Android 4.3 na avo kokoa.
Discover Sweek, sehatra vaovao hampifandraisana ireo mpanoratra sy mpanoratra a la Wattpad
Manaraka ny dian'ny Wattpad i Sweek mba hampifandray ireo mpanoratra sy mpamaky amin'ny toerana itovizany amin'ny fampiharana Android sy tranonkala.
[APK] Google Play Store kinova 6.8 dia mampihetsika ny kiheba "beta" ao amin'ny "My applications"
Ny kinova 6.8 an'ny Google Play Store dia misy ny takelaka "Beta" avy amin'ny "My applications" hahafantaranao hoe iza amin'ireo betas no andraisanao anjara amin'izao fotoana izao.
Sony Xperia Home dia nohavaozina amin'ny beta miaraka amin'ny fampidirana tanteraka amin'ny Google Now
Xperia Home no hany mpandefa izay nampifangaro tanteraka ny asa rehetra an'ny Google Now ary noho izany dia tsy mitovy amin'ny ambiny.
Google Maps for Android dia havaozina amin'ny toerana maro
Google Maps dia nohavaozina miaraka amin'ny endri-javatra miavaka mifandraika amin'ny toerana maro izay azo voafantina alohan'ny hahatongavany amin'ny toerana haleha
Google Keep dia mandray fiasa "marani-tsaina" izay hanasokajiana ireo naotinao mifototra amin'ireo lohahevitra noforonina ho azy.
Androany aho dia manazava ny fomba marina hametrahana ny Game Launcher tsy mila Root na fanamboarana novaina, manan-kery ho an'ny Samsung Galaxy Note 5 sy Galaxy S6.
Ahoana ny fomba ahafahana mampiseho ny fisehoan'ny Motorola amin'ny Android rehetra
Ato amin'ity fampianarana video azo ampiharina ity dia asehoko anao ny fomba ahafahana mampiasa ny efijery Motorola manodidina ny terminal Android mampiasa ity modely Xposed manaitra ity
VPInput no fampiharana LG hifehy ny LG G5, G4 ary V10 amin'ny solosaina
LG dia nanangana ny fampiharana VPInput izay ahafahanao mifehy ny smartphone G4, G5 na V10 anao amin'ny PC-nao avy amin'ny fifandraisana Bluetooth.
Ny kalitao tsara indrindra amin'ny rindrambaiko fandraisam-peo 4 tsara indrindra
Evernote, Keep, OneNote ary Simplenote dia fampiharana avo lenta efatra izay tsy mitovy noho ny andiana hatsaran-toetra.
Ahoana ny fomba fanakanana ny fampiharana amin'ny alàlan'ny mpamaky ny rantsan-tananao Android
Anio dia asehonay anao ny fomba fanakanana ireo fampiharana amin'ny alàlan'ny mpamaky ny dian-tanan'ireo terminal Android anay mba hananana fifehezana sy fiainana manokana.
[APK] Azonao atao izao ny manandrana ny apps Grace UX, ilay mpifanitsy amin'ny Samsung Galaxy Note 7
Ny Galaxy Note 7 an'ny Samsung dia ho tonga amin'ny fanavaozana ny sosona namboarin'izy ireo hoe Grace.
Todoist Business dia nohavaozina miaraka amin'ny tanjona hanatsara ny fiaraha-miasa amin'ny ekipa
Fanavaozana vaovao ny orinasa Todoist izay mifantoka amin'ny lafiny manan-danja indrindra amin'ny fiaraha-miasa amin'ity serivisy ho an'ny ekipa ity.
Ny rindranasa tsara indrindra hanamboarana ny on the Samsung Galaxy S7 sy LG G5
Androany aho dia manolotra izay ho ahy no rindranasa tsara indrindra hanahafana ny On On of the Samsung Galaxy S7 na LG G5.
[APK] Google Fit dia nohavaozina miaraka amin'ny fanitsiana ny endrika, ny tanjona kendrena ary ny widget azo ovaina
Ankehitriny ianao dia afaka ao amin'ny Google Fit manamboatra ny widget, manampy tanjona bebe kokoa ary miditra amin'ny rindranasa nohatsaraina tamin'ny endriny amin'ity kinova vaovao ity.
Keyboard Swim ho an'ny olon-dehibe dia kitendry maivana ho an'ny mpankafy ny fahitalavitra
Raha mitady kitendry mahazatra ianao izay misy atiny voalohany avy amin'ny fantsom-pahitalavitra Adult Swim, dia efa anananao amin'ny Android amin'ny fomba ofisialy
Google Photos dia nohavaozina miaraka amina fisehoan-javatra izay mahavita mampifanaraka ireo sary nofafanao avy amin'ny fampiharana galeriana hafa.
Ahoana ny fomba hampifanarahana tanteraka ny fampiharana Gmail tany am-boalohany
Ato amin'ity fampianarana azo ampiharina vaovao ity dia asehoko anao ny fomba fanarahana tanteraka ny fampiharana Gmail tany am-boalohany ho an'ny Android mba hahatonga azy ho antsika.
Fampiharana zava-misy virtoaly 5 hanombohana amin'ny Google Cardboard
Fampiharana 5 ho an'ny VR na zava-misy virtoaly ahafahanao mahafantatra ny zavatra niainana tsara indrindra tamin'ity karazana atiny ity izay mahazo fankatoavana
Facebook Live dia hahazo kinova lehibe kokoa amin'ny alàlan'ny fandefasana olona roa amin'ny fotoana iray sy bebe kokoa
Facebook Live dia hilalao miaraka amin'ny hoditra MSQRD sy ny fahaizana mandefa olona roa amin'ny fotoana iray mandritra ny volana vitsivitsy.
Ny mpampiasa WhatsApp dia miantso mihoatra ny 100 tapitrisa isan'andro
Antso maherin'ny 100 tapitrisa no atao isan'andro avy amin'ny WhatsApp, izay mampiseho ny haavon'ny fanekena an'io endri-javatra io.
HTC te hitondra Sense Home amin'ny fitaovana Android rehetra
HTC manokatra varavarana ao an-tranonao ary handefa ny fampiharana Sense 8 ao amin'ny Google Play Store ka ahafahan'ny fitaovana Android mametraka azy io.
Google Maps dia havaozina tsy ho ela miaraka amin'ny safidy hisintona ireo sari-tany tsy misy fifandraisana amin'ny SD
Google Maps dia tsy ho ela dia hampiditra ny fahafaha misintona sarintany ivelan'ny Internet amin'ny karatra micro SD amin'ny findainao mba hanafahana ny lehibe indrindra.
BitTorrent Now dia rindrambaiko mozika tsy miankina vaovao tonga amin'ny Android
BitTorrent Now dia rindranasa vaovao iray izay tonga hanokatra toerana ho an'ny mozika tsy miankina ary samy misitraka izany ny mpitendry sy ny mpampiasa
Hanolotra ny fahafahan'ny streaming mivantana ny fampiharana YouTube atsy ho atsy
Mitsambikina eo amin'ny lamasinina mivantana i YouTube ary vetivety dia ho afaka handefa ianao ka ny horonantsary vokariny dia voatahiry ao amin'ny kaontinao.
Inona ny Snapchat ary inona no mampiavaka azy amin'ny fampiharana hafa
Snapchat dia mifandray amin'ny mpihaino tanora marobe izay mahita sary amin'ny fomba hafa noho ny fanaon'ny olon-dehibe.
Snapseed dia nohavaozina miaraka amin'ny mpangalatra loko tsy mitanila sy profil ho an'ny RAW
Snapseed dia mbola fampiharana mahaliana amin'ny famerenana sary indray ary nohavaozina miaraka amina endrika vaovao roa mahaliana.
Instagram dia hampiditra bokotra handika amin'ny volana ho avy
Instagram dia nihevitra ny hampiditra bokotra handika amin'ny ampahany amin'ny mombamomba sy ny tantaran'ny mpampiasa mandritra ny volana manaraka.
Misy antso an-tsary BBM misy manerantany
BBM dia nandrakotra ny faritra sisa tavela tamin'ny antso an-tsary avy amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra, noho izany dia manerantany izao.
Afaka mampiasa maimaim-poana ny hidim-baravarankely amin'ny Evernote ianao izao
Evernote dia mandefa fampiasa premium, toy ny hidy tenimiafina, amin'ny kinova maimaim-poana manomboka anio ho toy ny zava-baovao
VLC 2.0 Azo alaina ho an'ny olona rehetra miaraka amin'ny fizahana Network, Android TV Interface, sy maro hafa
VLC dia nohavaozina ho amin'ny kinova 2.0 izay mitondra miaraka aminy fizahana haino aman-jery eo an-toerana ny fifandraisana, Android TV interface sy maro hafa.
Ahoana ny fampiasana Kodi, mpilalao media Android feno indrindra
Amin'ity fampianarana momba an'i Kodi ity dia ho fantatrao ny tsiambaratelo rehetra hampiasana ny ankamaroan'ny mety ho an'ny haino aman-jery haino aman-jery Android tsara indrindra
Ny Twitter dia efa mamela anao handefa horonantsary maharitra 140 segondra
Afaka mandefa horonan-tsary ao amin'ny Twitter miaraka amin'ny faharetana 140 segondra ianao izao, satria vao avy nanambara ilay orinasa avy amin'ny bilaoginy manokana.
Tumblr dia miomana hanolotra streaming video mivantana
Tumblr dia serivisy iray hafa izay manampy ny fironana ankehitriny izay midika hoe mandefa horonantsary amin'ny fotoana tena izy ary nahitantsika an'i Periscope
Nahazo tsikera noho ny fanerena ny Messenger hitantana ny SMS ny Facebook
Nahazo tsikera ny Facebook satria saika nanery ny mpampiasa hampiasa Messenger ho fampiharana fitantanana SMS.
Fitbit dia manolotra fitaovana vaovao hanampy anao hatory tsara kokoa
Ny app Fitbit dia misy izao ny endri-javatra Fandaharam-potoana Torimaso izay manome sosokevitra sy fampahatsiahivana hanatsarana ny ora fatorianao.
Ahoana ny fametrahana GIF mihetsika amin'ny biraonao finday
Ampianarinay ianao hametraka GIF mihetsika amin'ny birao finday avo lenta amin'ny fomba tsotra sy mora amin'ity rindranasa ity.
Nanampy i "Waze Croix komplicated" i Waze; amin'izao fotoana izao any Los Angeles ihany
Waze dia nanisy fampisehoana mahaliana hahafahana misoroka ny "Tough Crossings" amin'ireo làlana izay mety hanasatra ny mpamily.
[APK] ES File Explorer nahazo fanavaozana lehibe taorian'ny buzz doka
ES File Explorer kinova 4.1 dia mahazo fanavaozana interface tsara ary manatsara ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny efijery lehibe.
VOEZ dia mozika sy traikefa an-tsary manasongadina ny sarimiaina
VOEZ dia manolotra traikefa amin'ny mozika iray manontolo izay hahatonga anao ho mpandray anjara amin'ny tarika mozika mitendry karazan-java-maneno isan-karazany
Ahoana ny fomba fampidinana na fijerena sarimihetsika amin'ny terminal Android anao
Ampianarinay anao ny fomba samihafa fampidinana na fijerena horonantsary amin'ny fitaovanao Android amin'ny alàlan'ny andian-tranonkala maimaimpoana sy fampiharana.
Bot Slack izay mamadika ny resaka isan'andro ho lalao isa
Scorebot dia bot ho an'i Slack izay ahafahanao manova ireo resaka ireo amin'ny fantsona ho lasa fifaninanana tena mahafinaritra.
SwiftyKey Beta dia mampiditra endri-panoratan-tsipika izao
Ny klavier malaza indrindra ao amin'ny Google Play Store, Swiftkey, dia nanatsara ny safidiny ary apetaho amin'ny endri-tsarimihetsika.
Antony 5 mahatonga ny ADW Launcher ho lasa mpandefa fampiharana tianao indrindra
ADW Launcher dia novaina ho amin'ny kinova 2.0 aorian'ny niandrasana ny 5 taona hitrangan'izany. Nahavita izany tamin'ny fomba tsara indrindra Izy.
Google Photos dia mamela anao hanao fampisehoana slide na "Slalomows" mba hampisehoana ny sary rehetra anananao ao anaty rakikira iray avy amin'ny fahitalavitra na soloanao
Facebook Messenger dia nohavaozina amin'ny tabilao vaovao ho an'ny Home
Nohavaozina ny Facebook Messenger miaraka amin'ny vakizoro vaovao izay manamora ny fanombohana resaka.
ADW Launcher 2.0 natomboka taorian'ny 5 taona tsy nahalala na inona na inona momba azy
ADW Launcher dia manana ny toerany amin'ny tantaran'ny Android ho iray amin'ireo mpandefa fampiharana tsara indrindra. Ankehitriny dia manana ny kinova 2.0 izahay.
Ahoana ny fomba hilalaovana soa aman-tsara ny loteria nasionaly amin'ny Android-nao. (Bonoloto, Primitiva, Euro tapitrisa, La Quiniela,)
Androany aho manazava ny fomba filalaovana ny lalao Lottery Nasionaly sy ny Loteriam-panjakana amin'ny Android sy amin'ny fomba azo antoka tanteraka.
Ny antony roa mahatonga ny Apple tsy hitondra iMessage amin'ny Android
Tamin'ity herinandro ity dia antenaina fa manana ny kinovan'ny iMessage amin'ny Android izahay, saingy farany tsy mbola toy izany ary ireo no antony roa tsotra.
Shazam for Android izao dia afaka mahita izay mozika henoinao
Avy amin'ny safidy "AUTO" ao amin'ny Shazam ho an'ny Android, amin'ny alàlan'ny fanombohana ny fampiharana fotsiny dia azonao atao ny mahita ilay hira milalao nefa tsy mila manindry bokotra akory.
Ahoana ny fanaovana ny Android ho toy ny iPhone 6 an'ny Apple
Tutorial izay hanazavana ny fomba hahazoana ny fisehoan'ny iPhone 6 amin'ny Android miaraka amin'ireo mpandefa tsara indrindra misy ao amin'ny magazay fampiharana.
App: Shortcut Creator dia fampiharana izay miaraka amina toerana tsotra nefa koa manana fampiasa mandroso ho an'ny fanaingoana
Ao amin'ny Android N dia azonao atao izao ny mamaly hafatra mivantana avy amin'ny Twitter amin'ny alàlan'ny valiny haingana
Twitter dia efa manolotra fanampiana amin'ny valiny haingana ao amin'ny Android N hamaly ireo hafatra mivantana tonga avy amin'ity tambajotra sosialy fandefasan-kafatra micro ity
Telegram dia nohavaozina miaraka amin'ny drafitra ao anaty rahona, mpilalao horonantsary vaovao ary maro hafa
Ankehitriny dia azonao atao ny mampifanaraka ireo drafitra amin'ireo fitaovana marobe hahafahanao miverina amin'ilay hafatra mbola tsy vita amin'ny Telegram.
Facebook Messenger amin'ny Android dia mahazo fanohanana amin'ny SMS
Ao amin'ny Facebook Messenger for Android, misy ny fanohanana ankehitriny ho an'ireo hafatra SMS izay hiseho mavokely mba hanavahana azy ireo amin'ny ambiny.
Cropens Crop and Share, fampiharana mitovy amin'ny LG's Memo Quick manan-kery ho an'ny Android rehetra
Anio dia asehonay anao ny fomba fananana ny LG Quick Memo fiasa amin'ny terminal Android rehetra noho ny fampiharana maimaim-poana misy ao amin'ny Play Store.
Ahoana ny fomba hitehirizana na hampiato ny fampandrenesana Android mba tsy hanadinoanao azy ireo mihitsy
Mampianatra ny fomba hitehirizana na hanemorana ny fampandrenesana rehetra tonga amin'ny finday finday Android amin'ny fomba tsotra sy maimaim-poana izahay.
Androany dia manazava fomba roa tena tsotra amin'ny alàlan'ny fampiharana maimaimpoana roa izahay izay hahafahantsika manova PDF amin'ny Android.
[APK] Sintomy ny Google Play Services ho an'ny fitaovana Android rehetra
Te hametraka serivisy Google amin'ny fitaovanao Android ve ianao? araho ny tutorial izay manazava ny fomba fanavaozana ny serivisy Google Play
Ahoana ny fomba hijerena ny lalao any Espana mivantana amin'ny Android-nao sy ny Euro 2016 rehetra
Androany aho manazava ny fomba hijerena ny lalao any Espana sy ny lalao rehetra amin'ity Euro 2016, Euro 2016 izay lalaovina any Frantsa ity.
Vonona ny handefa ny serivisy fandefasana mozika an-tserasera i Amazon
Amazon dia saika vonona amin'ny serivisy mivantana mozika an-tserasera izay ho tonga amin'ny faramparan'ny fahavaratra na amin'ny fiandohan'ny fararano.
Ny hoditra fiambenana tsara indrindra ho an'ny Android Wear
Androany aho manolotra anao ny hoditra fiambenana tsara indrindra ho an'ny Android Wear, famantaranandro LCD manintona amin'ny fomba madio indrindra amin'ireo izay lasa lamaody tamin'ny taona 80.
[APK] Chrooma KeyBoard, fitendry mitovy amin'ny Android ofisialy, nohavaozina ho 3.0
Chrooma Keyboard dia kitendry manana predilection lehibe ho an'ny loko sy ho chameleonic miankina amin'ny fampiharana ampiasainao. Nohavaozina ho 3.0.
Ny fampiharana tsara indrindra hampidinana mozika amin'ny Android
Jereo ny programa tsara indrindra hampidinana mozika maimaim-poana amin'ny Android. Ampidiro ary fantaro ireo fampiharana azonao apetraka handefasana mozika amin'ny findainao na tablette
Twitter dia efa manana ny bokotra ho an'ny Periscope natsangana tao amin'ny Android
Ianareo izay manana fitaovana Android misy ny fampiharana Twitter dia afaka mampiasa ny bokotra manokana momba azy io handefasana Periscope.
VSCO, iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra amin'ny famerenana sary ny sary, manavao ny endriny
VSCO dia iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra ho an'ny sivana, famerenana sary ary vondrom-piarahamonina mpampiasa ahafahanao mizara ny sarinao.
Manomboka anio, na amin'ny kinova desktop, iOS na Android, afaka mamaly amin'ny horonan-tsary amin'ny hafatra ao amin'ny Facebook ianao.
WhatsApp dia manampy ny fahaizany mitanisa ny hafatry ny mpampiasa amin'ny kinova beta
Ny WhatsApp androany dia nampiditra ny fahaizana mitanisa ny hafatry ny mpampiasa handefasana ireo vondrona miresaka izay mikorontana indraindray.
Open Camera, fakantsary fakana sary ho an'ny Android Open Source miaraka amina safidy fikirana maro
Androany izahay dia manoro hevitra ny Open Camera, iray amin'ireo fampiharana fakantsary tsara indrindra ho an'ny Android, loharano malalaka sy malalaka.
Google dia manatsara tokoa ny traikefa amin'ny fitetezana amin'ny Maps
Avy amin'ny lafiny mpizara, nanatsara ny traikefa fitetezana tamin'ny alàlan'ny Google Maps i Google noho ireo fihetsika sy ilay tsipika fitaterana manga vaovao
Androany no atolotray anao ny mpanjifa Telegram tsara indrindra ho an'ny Android, fampiharana izay azonay alaina maimaimpoana amin'ny fipihana ity lahatsoratra ity.
Fast, mpanjifa Facebook manolotra traikefa hafa, mahazo fanavaozana lehibe
Amin'ny fahafahanao mamorona ny lisitry ny tsoratadidin'ny pejy sy ny fifandraisana, Fast dia mpanjifa Facebook izay manome traikefa hafa noho ny tambajotra sosialy.
Ny interface Windows 10 amin'ny Android dia noho ity Launcher maimaim-poana ho an'ny Android ity
Androany aho dia manazava ny fomba hankafizana ny interface Windows 10 amin'ny Android miaraka amin'ny Launcher tsara indrindra ho an'ny Android amin'ny fomba.
Ny antso an-tariby dia endrika vaovao Slack
Slack dia nanjary iray amin'ireo rindrambaiko tsara indrindra ho an'ny fiaraha-miasa ary izao dia nohavaozina tamin'ny antso am-peo.
Twitter dia manavao ny tenany amin'ny Material Design miaraka amin'ny menio fitetezana, bokotra FAB ary maro hafa
Twitter dia nahazo fanavaozana lehibe niaraka tamin'ny Material Design sy vaovao mahaliana sasany hametrahana anay eo alohan'ny fampiharana tsara kokoa.
Nanavao ny Snapchat ary manavao ny interface Stories and Discovery
Ho an'ireo mpankafy Snapchat, andro tsara androany hanavaozana ilay fampiharana miaraka amina fanavaozana lehibe izay manaparitaka ireo tantara sy mahita.
Power Toogles, ny fampiharana tsara indrindra hamoronana bara hitsin-dàlana amin'ny ridao fampandrenesana Android anao
Androany dia asehoko anao ny fomba famoronana bara hitsin-dàlana amin'ny ridao fampandrenesana Android amin'ny fomba tena tsotra sy tsy misy Root.
Play ny mozika YouTube tianao indrindra amin'ny écran hidy miaraka amin'ny fampiharana Stream
Miaraka amin'ny Stream ianao dia afaka mihaino ny mozika tianao indrindra amin'ny efijery hidin-trano na mamorona playlists hizarana amin'ny fifandraisana.
Ahoana ny fomba hisoratana anarana amin'ny Bein Sports
Androany aho dia manazava ny fomba rehetra misoratra anarana na misoratra anarana amin'ny Bein Sports ary mankafy ny Liga BBVA, Copa del Rey, Champions League ary fifaninanana nasionaly sy iraisam-pirenena hafa na aiza na aiza misy antsika.
[APK] Google Clock dia manampy fanaraha-maso ny habetsahana sy ny hovitrovitra, ny fiovan'ny maso ary maro hafa
Google Clock dia nohavaozina amin'ny kinova 4.4 izay misy antsipiriany hita maso sy slider vaovao roa ho an'ny fifehezana ny habetsahana sy ny hovitrovitra
Viber dia nohavaozina ao amin'ny 6.1 miaraka amin'ny fanohanan'ny GIF, famerenana ny tantaran'ny hafatra sy maro hafa
Viber dia nohavaozina amin'ny kinova vaovao 6.1 izay misy ny fanohanana ireo sarimiaina GIF sy ny fahaizany mamintina ny tantaran'ny hafatra.
Snapchat hery Mahita amin'ny alàlan'ny Twitter mihoatra ny mpampiasa isan'andro
Hainay fa ny Snapchat dia nihoatra ny Twitter tamin'ny isan'ny mpampiasa miditra amin'ny fampiharana isan'andro miaraka amin'ny 150 tapitrisa amin'izy ireo.
Fampiharana 10 hahazoana tombony betsaka amin'ny efijery lehibe indrindra amin'ny takelakao
Fampiharana tena ilaina 10 ho an'ny takelaka Android anao izay efa namboarina ho interface tsara ho an'ity fitaovana lehibe kokoa ity
Flamingo ho an'ny Twitter dia mpanjifa tena tsara ary be resaka amin'ny sary
Flamingo dia mpanjifa Twitter vaovao izay miloka amin'ny endrika hita maso ary manolotra safidy fanamoriana tsara.
Asehon'i Microsoft hoe toa manao ahoana ny endrik'ilay fiambenany Outlook vaovao ho an'ny Android Wear
Microsoft no Tompon'izao rehetra izao raha momba ny lozisialy, ary manaporofo izany indray izy ireo miaraka amin'ity fiambenana Outlook kanto ho an'ny Android Wear ity.